Garyaqaanka Guud ee Puntland: Camey xaq uma lahan magacaabista guddiga xallinta khilaafaadka - Halbeeg News
GAROOWE (HALBEEG)- Garyaqaanka guud ee dowlad goboleedka Puntland, mudane Maxamed Yuusuf Maxamuud ayaa qoraal uu xafiiskiisa kasoo saaray waxa uu kaga hadlayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda sare ee Puntaland.
Mudane Maxamed oo ka soo horjeestay warqaddii uu soo saaray Camey ayaa sharci darro iyo xeerka oo la baal maray ku tilmaamay guddigii xallinta khilaafaadka ee uu soo magacaabay madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cumar Camey.
Xafiiska garyaqaanka ayaa gabi ahaanba waxba kama jiraan ku tilmaamay magacaabistii guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiillada Puntland ee uu soo dhisay madaxweyne ku xigeenka isaga oo sheegay in madaxweyne ku xigeenku uusan xaq iyo sharci midna u lahayn soo dhisidda guddigaas.
Warka kasoo baxay xafiiska garyaqaanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne ku xigeenka uusan dhisi karin guddiga haddii uusan uwakiilanin madaxweynuhu.
Taniyo markii madaxweyne Gaas uu soo magaacabay guddiga xallinta khilaafaadka ayuu muran siyaasadeed soo kala dhexgalay isaga iyo ku xigeenkiisa oo isna soo magacaabay guddi kale oo uu ugu magac daray xallinta khilaafaadka.
Musharraxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Puntland ayaa dhawaan gaashaanka u daruuray guddigii uu magacaabay madaxweyne Gaas kaasoo ay ku tilmaameen in uu ku dhisanyahay eex, nin tooxsi iyo daneysi siyaasadeed.
Khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhexgalay madaxda Puntland ayaa imanaya xilli gobolku uu diyaar garow ballaaran ugu jiro qabashada doorashada wakiillada iyo tan madaxweynaha maamulkaas.
Ismariwaaga siyaasadeed ee ka jira Puntland ayay cidba cidda kale ku eedeyneysaa in ay jabinayso sharciga iyada oo fulinaysa ajandayaal looga soo meeriyay meelo kale.
Soomaaliya oo noqotay dalka lixaad ee addunka ugu khatarta badan